Tele RELAY တစ်ခု - မော်ကွန်း FOR
L’homme d’affaires israélien Dan Gertler, en 2012. © Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images L’homme d’affaires israélien Dan Gertler, au...
မင်းသားချားလ်စ်၏ဝမ်းနည်းခြင်း - အနာဂတ်ဘုရင်အတွက်ယနေ့မည်မျှအရေးပါမှုရှိသနည်း။
AHMEDABAD: président américain Donald Trump Lundi,aaffirmé que les relations avec l'Inde occupent une place spéciale pour son pays, affirmant que l'Amérique "aime" et est "fidèle" à l'Inde. S'adressant à…
မူလတန်းဒီမိုကရက်များ - Bernie Sanders ကို Donald Trump နှင့်တွေ့ဆုံရန်အကြိုက်ဆုံး - ဗီဒီယို
အသက် ၇၉ နှစ်ရှိဒီမိုကရက်သမ္မတလောင်း Bernie Sanders ကိုအနိုင်ရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါက၎င်းသည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။
အိန္ဒိယ - ပခုက္ကူလိုလားသောကြွေးကြော်သံများကိုပစ်ရန်လိုအပ်သည် - Karnataka Mantri | အိန္ဒိယသတင်း
ဘင်္ဂလားဒူ / ကဒဂူ - ၁၉ နှစ်အရွယ်ကျောင်းသား Leona Noronha သည် CAA ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွင် Amulya ၏ကြွေးကြော်သံကိုသုံးရက်အကြာတွင်ပုန်ကန်ရန်လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်မုန်တိုင်းကျခဲ့သည်။ Karnataka ဝန်ကြီး BC Patil …
သမ္မတ Trump နှင့် Melania Trump အိန္ဒိယသို့ထွက်ခွာ - ဗီဒီယို
အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump နှင့် First Lady Melania Trump တို့သည်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်၊ ၎င်းသည်ဘီလီယံနှင့်ချီသောရောင်းအားရှိသောဤတောင်အာရှနိုင်ငံသို့သမ္မတ Trump ပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယ - CJI မှညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှု မှလွဲ၍ HC တရားသူကြီးများကိုတရားစီရင်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ အိန္ဒိယသတင်း
နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိတရားရုံး ၂၅ ခုတွင်တရားသူကြီးပေါင်း ၁,၀၇၉ ဦး ရှိသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်အကြားအိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ် ဦး ဆောင်သောကောလိပ်သည်တရားသူကြီး ၂၄ ဦး နှင့်တရားသူကြီး ၉ ဦး ကို HC တစ်ခုမှတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းရန်အကြံပြုခဲ့သည်။
NEW DELHI: Alors que le monde est aux prises avec le changement climatique et d'autres problèmes environnementaux, le juge en chef de l'Inde S A Bobdeaproposé dimanche une loi unique pour tous des pays pour traiter…
အီတလီသည်ဥရောပ၏ပထမ ဦး ဆုံး Coronavirus ကပ်ရောဂါကိုထိန်းချုပ်ရန်ရုန်းကန်နေရသည်။
မီဒီယာ - အစိုးရအရာရှိများသည်တနင်္ဂနွေနေ့ကဥရောပတွင်ပထမဆုံးသော coronavirus ကူးစက်ရောဂါကူးစက်ခြင်း၊ မီလန်အနီးရှိအနည်းဆုံးမြို့ ၁၀ မြို့ကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်း၊
မင်းသမီး Charlotte - ကိတ်နဲ့ဝီလျံကိုတော်ဝင်မိသားစုကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့တာလဲ
var brightcoveBrandsafety = '4 အားကစားနှင့်အထူးသတင်းသတင်း - ကြော်ငြာကို ဦး တည်သည်' ၄ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေး၏နာမည်အပြည့်အစုံမှာ Charlotte Elizabeth Diana ဖြစ်ပြီးတော်ဝင်သမိုင်း၊
123 ... 167 လာမယ့်